Inflation Inoderera Zvishoma
Gunyana 14, 2010
Sangano reZimbabwe National Statistical Agency kana kuti ZIMSTATS rinoti inflation yaderera kubva pa4,1% kusvika pa 3, 6%.
Asi hapana kuwirirana panyanzvi dzezvehupfumi pakumira kwehupfumi mune remangwana. Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaJohn Robertson, vayambira kuti vashandi vakawedzerwa mari dzemihoro dzavanaoti vari kuda, inflation ichatokwira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzehupfumi, Doctor Godfrey Kanyenze, vanoti mari yevashandi haingavhiringidze hupfumi nekuti hapana mari zhinji yavari kutambira.
Dare remakurukota rambozeya nyaya yekuwedzerwa kwevashandi mari iyi, asi nyaya iyi yanzi imbotanga yazeyiwa negurukota rezvevashandi vehurumende, Professor Eliphas Mukonoweshuro, gurukota rezvemari, VaTendai Biti, uye bazi rePublic Service Commission.
Vashandi vehurumende vakayambira kuti vacharatidzira mukati memwedzi kana vasina kuwedzerwa mari. VaMukonoweshuro vaudza Studio7 kuti vari mushishi kuronga misangano kuti vaone zvekuita nemari dzemihoro. Hurukuro dziri kuitwawo pakati pevashandi nevashandirwi.